Tirakoobka 2020 | Xafiiska Tirakoobka Mareykanka
This is a condensed, translated version of the 2020 Census website in Somali.
Habkan waa mid kooban oo ah turjumaadda 2020census.gov. Guji halkan si aad ugu noqoto habka caadiga ah ee ku qoran afafka Ingiriiska iyo Isbaanishka.
Somali / Soomaali so
DADKA LA SII WADAAG:
Xafiiska Tirakoobka hadda ma aruurinayo jawaabihii Tirakoobka 2020. Boggan waxaa ku jiro macluumaad guud oo ku saabsan tirinta, iyo sababta natiijooyinka ay muhiim ugu yihiin bulshooyinka dalka oo dhan. Waad ku mahadsantahay jawaabtaada!
Waa maxay Tirakoobku?
Tirakoobka 2020 waa tirin lagu sameeyo dadka ku nool Mareykanka qof-weyn, nuunne, iyo ilmo. Tobankii sanaba mar ayaa tirinta waxaa sameeya Xafiiska Tirakoobka Mareykanka, oo ah hay'ad dowladeed.
Muxuu Muhiim u Yahay
Tirakoobka waxaa laga helaa xog muhiim ah oo saameyn ku yeelan karta qeybo badan oo noloshaada ka mid ah. Sharci-dejiyeyaasha, milkiileyaasha meheradaha, macallimiinta, iyo meelo kale ayaa isticmaala xogtan maalin kasta si ay deegaanka aad ku nooshahay ugu sameeyaan adeegyo, waxyaabo kale iyo taakuleyn.
Sannad kasta, balaayiin doolar oo ah maalgelinta faderaalka ayaa lagu kharash gareeyaa isbitaallada, waaxyaha dabdamiska, iskuullada, jidadka, iyo waxyaabo kale iyadoo lagu saleynayo xogta tirakoobka.
Natiijada tirakoobka ayaa lagu go'aamiyaa tirada kuraasta gobolka u galeysa Koongareeska, oo waxaa kale oo lagu calaamadiyaa xuduudaha codeynta ee degmooyinka.
Tirakoobka waa shuruud uu u baahan yahay Dastuurka Mareykanka: Qodobka 1-aad, Farqaddiisa 2-aad, oo dowladda Mareykanka ayaa waajibisay in 10-kii sanaba mar la sameeyo tirin dadweyne. Tirintii ugu horreysay waxaa la sameeyey 1790.
Arrimaha Shakhsiga ah iyo Ammaanka
Jawaabahaaga waxa keliya oo loo isticmaalayo waa tirakoobyada.
Xafiiska Tirakoobka sharci ahaan ayaa looga baahan yahay dhowridda jawaabaha dadka iyo in ay ka dhigaan wax si adag qarsoodi u ah. Xaqiiqadii shaqaalaha oo dhan ayaa lagu dhaariyaa in ay dhowraan wixii warbixin shakhsi ah noloshooda oo dhan.
Sida uu dhigayo Sharciga 13 ee Mareykanka, Xafiiska Tirakoobka ma bixin karo macluumaad dadka lagu aqoonsan karo hadday noqon lahayd gurigaaga, ama meheraddaada, oo xataa booliska uma gudbin karaan. Sharciga ayaa kuu xaqiijinaya in la dhowri doono xogtaada gaarka ah iyo in aysan hay'ad dowladeed ama maxkamad jawaabahaaga marna adiga kuu isticmaali karin.
Tirakoob Qaadeyaasha Xaafaddaada
Sannadka dambe waxaad xaafaddaada ku arki doontaa tirakoob qaadeyaal.
Waa qeyb ka mid ah hawsha Tirakoobka 2020. Waxaad arki doontaa shaqaalaha tirakoobka oo deegaankaaga imaanaya sababo dhowr ah oo kala duwan awgood:
Waxa ay xaqiijinayaan ciwaanno iyagoo isu diyaarinaya tirakoobka.
Waxa ay soo booqanayaan guryo tirakoobka awgiis ama daraasadeyn kale ayey u sameynayaan Xafiiska Tirakoobka.
Waxa ay keenayaan macluumaad ku saabsan tirakoobka.
Waxa ay xaqiijinayaan hawl la xiriirta tirakoobka.
Bisha Meey ee 2020, tirakoob qaadeyaasha waxay bilaabi doonaan booqashada guryaha aan ka soo jawaabin Tirakoobka 2020 si ay u hubsadaan in qof kasta tirada lagu daray.
Sida Aad Noo Caawin Karto
In 2020 la helo tiro buuxda oo sax ah waxa ay qof kasta uga baahan tahay taageero, waxaase jira siyaabo kale oo ay noo caawin karaan dadka, meheradaha, ururrada deegaanka, iyo meelaha kale.
Dadka oo Loo Sheego
Waxaad nagu caawin kartaa in aad akhbaarta iyo macluumaadka Xafiiska Tirakoobka adiguna baraha bulshada kula sii wadaagto asxaabtaada, qoyskaaga iyo xiriirradaada Facebook, Twitter, iyo Instagram.
Iskaashi Nala Yeelo
Shirkadaha waaweyn, ururrada aan macaashka ku shaqeyn, hawl-wadeenka siyaasadda, iyo shakhsiyaad caadi ah ayaa dadka u sii sheegi kara Tirakoobka 2020 iyo sababta uu muhiim u yahay in laga qeybqaato.
Xayeysiiska Dadka La Wadaag
Xafiiska Tirakoobka wuxuu bixiyaa macluumaad badan oo ku saabsan Tirakoobka 2020 si loogu sii wargeliyo deegaan kasta.
Wixii Cusub ku hel Boostadaada Intarnetka
Noo qor ciwaanka boostadaada intarnetka
Wax Kasta Ogow